🚚 📦 Fandefasana maimaim-poana amin'ny fandoavam-bola mihoatra ny 50 €!
Vidiny ara-dalàna € 12.50
Ho hita eo aorian'izany
Lohatom-bokotra - Varotra vokatra amidy
Capillary sunscreen ho an'ny karazana volo rehetra, Be (M) Dita Praia Creme Protector dia manamboatra sakana miaro ny tariby amin'ny tara-masoandro.
Ny crème Proté Be (M) Dita Praia avy any Lola Cosmetics dia mbola misy fiantraikany miharihary, izay manampy rehefa manao grefy. Ankoatra izany, manana fiarovana mafana izy hialana olana raha mila mamita ny taovolony amin'ny hafanana ianao ary mahavita miady amin'ny volavavinao volo.
- Voaro amin'ny vokatry ny masoandro ny volo;
- Manamora mora;
- ny hydration, hamirapiratra sy malama;
Ampiharo ny fanosotra fiarovana amin'ny volo alohan'ny, mandritra sy aorian'ny fiposahan'ny masoandro. Mametaka vola be amin'ny tananao ary apetraho amin'ny volo mando na maina.